I-Alumina Ceramic yokugaya isher China Manufacturer
Home > Imikhiqizo > I-Advanced Ceramic Plate > I-Industrial Ceramic Plate > I-Alumina Ceramic yokugaya isher
I-Ceramic yokugaya isher
Ukushisa kwe-ceramic ephakeme yokugesi kagesi yenziwe nge-steatite C220, ingafakwa ngokucindezela okushisayo ngomzimba obunzima we-ceramic.
Siyakwazi ukwakha ubuciko be- ceramic yokufaka umshini wokushisa nge-ceramic njengemidwebo yamakhasimende kanye nokucaciswa, ngezinye izikhathi, sizosebenzisa ezinye izinqubo zokukhiqiza ngokucacile eziphezulu ukubhekana nalezi zindlela zokushisa, ezifana nokugaya okuhle, ukusika ngokucacile nokusika. Kungakhathaliseki ukuthi yiyiphi iphrojekthi ye-prototyping noma ilahlekelwa phansi. Yonke isherhi ye-ceramic esiyenzayo inemigomo efanayo.
Uma ufuna ezinye ze-ceramic zokugaya ama-washers. Sicela ukhululeke ukuxhumana nathi. Sizozama konke esingakwenza ukuze sikunikeze ikhwalithi yekhwalithi kanye nensizakalo njengoba kulindelwe.
Thina, ku-Jinghui Industry Ltd iyinhlangano ehamba phambili yezingxenye ze-ceramic e-China eminyakeni engaphezu kwengu-13, siye sahlinzeka nge-ceramic substrate, amashubhu e-ceramic, izindonga ze-ceramic, i-ceramic burrs, izikhonkwane zensimbi, izikhonkwane ze-ceramic, izikhonkwane zendwangu ye-ceramic, izingxenye ze-zirconia ze-ceramic kanye nama-textile ceream wire guidance kanye nokunye.
Isilondolozi se-Alumina Ceramic